लिपुलेकको माटो बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय जादै यी युवा ! टिका लगाउनेको यस्तो घुइचो (भिडियो सहित) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/लिपुलेकको माटो बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय जादै यी युवा ! टिका लगाउनेको यस्तो घुइचो (भिडियो सहित)
लिपुलेकको माटो बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय जादै यी युवा ! टिका लगाउनेको यस्तो घुइचो (भिडियो सहित)
नेपाली भुमी अतिक्रमण गरेर सर्वत्र बिरोध भइरहेको अवस्थामा नेपालका तीन सपुतहरु आमरण अनसन बस्नको लागि लिपुलेक पुगेका के एन बस्याल , स्वतन्त्र राष्ट्रिय खेलाडी महासंघका अध्यक्ष सेफर्ड लिम्बू र अभियन्ता रमित बलामी आज फर्किएका छन् । लिपुलेक मै पुगेर आमरण अनसन बस्न गत मङ्सिर १० गते (मंगलबार) त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए ।
१८ दिनपछि फर्केर आएपछि स्वगात गर्नेको भिड नै जम्मा भएको छ । टिका लगाएर उनीहरुलाई स्वागत गरिएको छ भने लिपुलेकबाट ल्याएको माटो बोकेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न उनको कार्यालय जाने भएका छन् । निकै दु:ख, कष्ट गरेर लिपुलेक पुगेको सम्झंदै उनीहरुले त्यो क्षण सम्झदा भावुक भएका छन् ।
यस अघि उनीहरुले काठमाडौँ स्थिति भारतीय दुतावास अगाडी अनसन बस्ने प्रयास गरेका थिए तर, उनीहरुलाई प्रहरीले रोकेको थियो । धर्ना बस्ने क्रममा समेत प्रहरीले उनीहरुलाई पटक पटक प*क्राउमा परेका थिए ।
भारतले लिपुलेकलाई आफ्नो देशमा समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारि गरेपछि उनीहरुले नेपाली भुमिलाई फिर्ता ल्याउन अनसन बस्न लागेको जनाएका छन् । स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान, मिसन नेपाल र परिवर्तनका लागि हाम्रो आवाजका पदाधिकारीले उनीहरुलाई विदाई गरेका थिए । हेरौँ उनीहरु फर्केर आएपछि गरिएको कुराकानी भिडियोमा :
चपली हाइटमा पत्रकारलाई ला’त हानियो ! एक्सन भन्दै पत्रकारमाथि खनिएपछी यस्तो ल’फडा (भिडियो सहित)